Ihe okike 5 Nkwupụta 7 nke June
Chei, ụmụ okorobịa! ọhụrụ ebu Mbupu oge !! Ha, Leenụ nwa agbọghọ ahịa anyị nwere obi ụtọ! Ọ dị mma, tupu m zipu foto a, nsogbu nyere m nsogbu n'obi m. Otu enyi nwere nnukwu njikọ "linkedIn" ejiri nye m ndụmọdụ ndụmọdụ obiọma: Hey, harry! Ọ dịghị mma ịkpọ nwa agbọghọ ka o soro m ...
N'oge ebu ikpe, ịkpụzi ntụpọ na-mere na-enweghị a na-enweghị amụma, N'ihi ya, a ọma ebu ikpe engineer kwesịrị ọgaranya ahụmahụ ikpe ihe mere dị ka ngwa ngwa dị ka o kwere, dị ka ndị na-eri na-amụba tinyere oge nọrọ na ọgwụ igwe. Ebe a anyị otu chịkọbara ụfọdụ experie ...
Ezigbo ndị na-agụ akwụkwọ, anyị kwurịtara banyere ngalaba imepụta iji chịkwaa ebu ọrụ nrụzigharị n'isiokwu ikpeazụ (Otu esi ejikwa nrụrụ nke ikuku & mmiri tank akụkụ? ọtụtụ ọrụ mgbanwe iji gbanwee akụkụ dịka ...
HaHa, maka nwoke tinyegoro na ụlọ ọrụ ebu maka afọ 8, enwere m ọtụtụ "mkpesa", nke mbụ bụ: girlsmụ agbọghọ pere mpe gbara anyị gburugburu… ọrụ nwere ike ọ gaghị adabara mma. dịka oke ọrụ, enwere eluigwe, ...
1, nhazi mbido nrụrụ bụ isi ihe gbasara ikuku na ikuku na mmiri mmiri na-akpụ akpụ plastik, ogo na-achịkwa nke imepụta na n'ichepụta siri ike karịa ụdị nkịtị, ebe ụdị akụkụ a na-akpụzi ihe PA6 (PA66) + GF (30-35%) onyinye, na ụdị ụdị a ...
Mee 15th, 2017- ebufe ebufe Mgbe ọnwa ole na ole gachara ọrụ ike, ebufere ezinaụlọ (nri-igbe) ebu n'aka ndị ahịa. Dị ka akụkụ bụ uzo (dị ka n'elu picture gosiri), na ahịa nwere a elu-larịị chọrọ na akụkụ anya. Ndi oru injinia anyi mere otutu ihe iji merie ...
1. Nzube nke ebu ebu? Imirikiti ntụpọ akpụzi na-eme n'oge ngwaahịa plastik na ịkpụzi ngwaahịa, mana oge ụfọdụ metụtara usoro ịkpụzi ezi uche adịghị na ya, gụnyere oke cavities; nhazi nke onye na-agba ọsọ oyi / ọkụ; ụdị, ọnọdụ na nha nke injectio ...